Samsung waxay racfaan ka qaadatay xukunkii ku qasbay inuu 548 milyan oo doolar siiyo shirkadda Apple | Wararka IPhone
Samsung waxay racfaan ka qaadaneysaa xukunka ku waajibinaya inay siiso Apple $ 548 milyan
Shirkadda Samsung ayaa hadda racfaan u gudbisay maxkamadda sare ee Mareykanka oo ay ka codsaneyso in shatiyadaha la sheegay in ay ku xadgudbeen Kuuriya dib loo tijaabiyo shirkad fadhigeedu yahay Cupertino. Samsung waxay ku andacooneysaa in xukunka khaaska ah kaliya uusan khaldaneyn, laakiin sidoo kale wuxuu ku doodayaa in sharciyada patent-ka ay yihiin kuwo waqtigooda dhacay oo ay tahay in dib loo eego lana cusbooneysiiyo. Kuuriyaanka ayaa sheeganaya in xeerbeegtida taasi xukuntay in loo xaglinayo Apple ma haysan macluumaad ku filan oo lagu fahmo sida shatiyada naqshadeynta u shaqeeyaan, ka soo horjeedka shatiyadaha korontada marka garsooruhu mas'uul ka yahay inuu tuso xeerbeegtida sida mid waliba u shaqeeyo.
Samsung waxay racfaan ka qaadaneysaa kiiskan maadaama ay u aragto in sida loo fasiray sharciyada aysan waafaqsaneyn waqtiyada casriga ah. Haddii aan helno tusaale sharci ah, si dacwadaha loogu talagalay naqshadaha nashqadeynta aysan ugu helin saamayn xun dhaqaalaha iyo macaamiisha.
Kuuriyaanka Samsung waxay horey u bixiyeen 548 milyan oo magdhow ah oo lagu xukumay laakiin waxay xaq u leedahay inay hesho lacag celin haddii racfaan laga qaato natiijada kama dambaysta ah ee tijaabada. Sanadkii la soo dhaafay, Samsung iyo Apple waxay ku heshiiyeen inay heshiis gaaraan si loo joojiyo dhammaan dacwadaha sharci ee ay kala kulantay adeegsiga xuquuqda lahaanshaha ee ka baxsan Mareykanka.
Ilaa Febraayo maxkamadda sare lagama filayo inay aqbasho racfaanka iyo inkale, laakiin hadday sidaas tahay, waxay ku yeelan doontaa cawaaqib muhiim ah adeegsiga shatiyadaha shirkadaha tikniyoolajiyadda badankood adeegsadaan. Haddii kale, go'aankani wuxuu joojinayaa qaab kasta oo sheegasho ah oo Samsung ah oo Kuuriyaanku ma lahaan doonaan fursad kale oo ay ku arkaan 548 milyan oo ay ahayd inay mar labaad bixiyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung waxay racfaan ka qaadaneysaa xukunka ku waajibinaya inay siiso Apple $ 548 milyan
Apple waxay kalabar ka dhigtay qiimaha iPhone 5s gudaha Hindiya
[RUMOR] 3D Touch ee iPhone 7 wuxuu noqon doonaa sida iPhone 6s; iPad Air 3 ee 2016